BF18 မှာ ယူနိက်တက်က လက်ရှိသူ့ရဲ့အချစ်တော်ကစားသမားကိုပြောခဲ့တဲ့ ပေါစခိုးလ် – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိက်တက် ကွင်းလယ်ကစားသမားဟောင်းပေါစခိုးလ်ဟာ မန်ယူရဲ့ရွှေရောင်နေ့ရက်များထဲက တောက်ပခဲ့တဲ့ မန်ယူငယ်မွေးခြံပေါက်ကစားသမားတဦးဖြစ်ပါတယ်..
ပေါစခိုးလ်ဟာ မန်ယူတသင်းထဲမှာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝကို ရိုင်ယန်ဂစ်နဲ့ အတူ အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်အတွဲအဖြစ်နဲ့ နည်းပြကြီးဖာဂူဆန်ရဲ့လက်အောက်မှာ ဖလားပေါင်းများစွာကို ရယူပေးခဲ့ပါတယ်…
ပေါစခိုးလ်ဟာ ဘောလုံးကစားသမားဘဝမှအနားယူပြီး BT Sport မှာ အားကစားဝေဖန်သူအဖြစ် ဖာဒီနန် ဟားဂရေ့စ်တို့နဲ့တူ လုပ်ဆောင်ပြီး ယနေ့မှာတော့ လက်ရှိမန်ယူကစားသမားတွေထဲဲက သူ့အကြိုက်ဆုံးကစားသမားတဦးကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်….
ပေါစခိုးလ် က ” ကျနော် ကစားသမားတယောက်လုံးကွင်းလယ်မှာ ကစားရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်တာမို့ လက်ရှိ BF18 ရဲ့ ရွေးချယ်ခိုင်းမှုအပေါ်မှာလည်း ကျနော်ကလက်ရှိ မန်ယူကွင်းလယ်ကစားသမားတွေထဲက ကျနော် ဘောလုံးအတူကစားချင်နေတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်…
သူကတော့ လက်ရှိမန်ယူကွင်းလယ်မှာ ကျနော်ကစားခဲ့တုန်းကထက်ပိုထူးချွန်တယ်….ပိုတော်တယ်….အဝေးကန်ချက်တွေတော့ ကျနော့်ကိုမမီသေးဘူး (ရယ်လျက်) …….ဒါပေမဲ့ သူဟာနောက်တချိန်မှာ ကွင်းလယ်မှာ မောင်းနှင်ပေးမဲ့ ကစားသမားပါ….
အဲ့ဒီကစားသမားကတော့ အများက ချစ်နေတဲ့ အားပေးမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ပါဘဲ….အခြေနေပေးမယ်ဆို သူနဲ့အတူ ကွင်းလယ်မှာ တပွဲလောက်တော့ ကျနော်ကစားချင်ပါသေးတယ် ” ဟု ပြောသွားခဲ့ပါတယ်…..